China Omenala Akara Ogologo Ogologo mmiri na-egbu maramara Eyeshadow 14 Agba Waterproof High Pigmented Shining Metallic Liquid Eyeshadow factory na ndị na-emepụta | Jinfuya
Omenala Akara Ogologo Ogologo Mmiri Na-egbuke egbuke Eyeshadow 14 Akara Waterproof Peeji Na-egbuke egbuke Na-egbuke egbuke
Gịnị Ka Ọ Bụ?
Anya mmiri mmiri dị elu na-enwe mmetụta dị elu, na-enwu gbaa na-enye gị nnukwu agba agba agba na mmetụta dị ọtụtụ.
More eke karịa anya onyinyo ntụ ntụ, ndammana kọntaktị na akpụkpọ, -enweghị ntụpọ anya etemeete mmetụta. Lelee anya na-acha anya na-acha uhie uhie site na mkpuchi anya a na-acha odo odo, nke edoziri maka akwa dị mma, ntakịrị ntakịrị ịdapụ na mmetụta dị elu; ma jiri mkpịsị aka ma ọ bụ ncha ihu anya dị larịị ma tinye onwe ya maka ụzọ aghụghọ, nke dị nro, ma ọ bụ na-ete ya n’elu nku anya maka ihe dị egwu.
Iji tinye ya n'ọrụ, gbanye onye na-etinye ya n'ime ọkpọkọ ma tinyezie ihe mkpuchi. Ngwakọta maka oké shimmery agba. Ọ bụ usoro na-adịghị nke nnyapade, nke dị fechaa, ma dị mma nke na-akpọnwụ ngwa ngwa iji nyere aka belata ọdịda.
Chọpụta ihe mere anyị ji hụ n'anya n'anya mmiri a na eyeshadow:
1.Liquid eyeshadow bụ ihe eke karịa anya onyinyo ntụ ntụ, ndammana kpọtụrụ akpụkpọ, mekwara ka Adam rie anya etemeete mmetụta.
2.Shimmer anya onyinyo nwekwara ụfọdụ mgbanwe mmetụta. Shimmer anya onyinyo ga-eme ka mmetụta nke etemeete dum dịwanye mma.
Ihe na-egbu maramara na anya na-abawanye saturation, na-eme ka anya dịkwuo atọ. Ọ bụrụ na ejiri ya maka mgbede, ọ ga-eme ka anya na-enwu gbaa n'ọchịchịrị ma bụrụ nke na-adọrọ adọrọ.
4. uru: Multi-akụkụ shimmer, Super-jupụta obi ike na agba, dị na 6shades, Ezigbo Glide, Na-abụghị nke nnyapade udidi, Kedu otu m ga na ala obi na-adị, Nwee nkụ ala iji belata ọdịda.
Ihe Nke J203
Akara Jinfuya ma ọ bụ Mee Onwe Gị
Udidi na-emetụtakarị akpụkpọ ahụ, na-enweghị ntụpọ anya etemeete mmetụta,Liquid ewute Eyeshadow, Na-adịgide Adịgide, Shimmer Ma Glow Eye Shadow, arktọpụ Ngwa ngwa-Ihicha, Highlighter Etemeete maka Anya ewute etemeete
Adabara eke karịa anya onyinyo uzuzu
Ọdịnaya Net 0.10 fl oz. (6 ml)
Ọrụ Usoro mmiri mmiri zuru oke maka ụdị anụ ahụ niile
Anyị na-ekwe nkwa Obi ọjọọ, vegan na 100% na-enweghị Phthalates, Parabens, Nonylphenol, Ethoxylates, Triclosan, Triclocarban, na Hydroquinone.
Banyere OEM Agba agba, Logo ngwugwu, mgwa ihe nwere ike ahaziri
Nke gara aga: N'onwe onwe Label etemeete Eyeshadow 35 agba waterproof Matte ụwa ụda pearlescent Sequined ewute Eyeshadow Palette
Osote: Shimmer Liquid Eyeshadow Vegan Makeup Anya Anya Ngosiputa 18 agba Nkeonwe Label Shinning Liquid Glitter Anya onyinyo
Anya mmiri mmiri
Liquid ewute Eyeshadow
Shimmer Liquid Eyeshadow Vegan Etemeete Anya Cosm ...
Private Label Makeup Eyeshadow 35 agba waterpr ...